I-China ye-CPLA eChwebisanayo yokuSusa iBhokisi yokuThengisa ngeeVenkile zebhokisi eyakhiwe kunye neeFektha | Gianty
I-CPLA eCwecwe lokuSika iBhokisi yokuThengisa kunye neBhokisi yokubonisa iTi-away
Ibhokisi ekhethekileyo nganye eyombathelwe i-CPLA nganye yeCPLA enokugqitywa ukusetywa kunye nebhokisi yokubonisa. Yenziwe kwizixhobo zeZityalo eziNokuhlaziywa kunye neziZinzileyo. Bamkelekile kwiimarike zaseYurophu nezaseMelika.
Le mveliso ipakishwe ngokukhethekileyo kwiPhepha lePhepha elishicilelweyo ngeWind-on Window. Yenzelwe ukuba ibe nokuqina kwaye ukutya okushushu kube bubushushu ukuya kuthi ga kwi-85 ℃. Iimveliso zethu zigqithise i-BRC, BPI, FDA kunye ne-EU. sinobukhulu obahlukeneyo kunye nemibala. Itafile ezisetyenziswa kwindawo yokutyela, ipati, umtshato, ipikniki, ivenkile, imarike enkulu kunye nenye indawo yokutya.
Phezulu kwinqanaba lakho lokulahla elinokuchithwa, kunye nomqolo wethu weCPLA Cutlery Range. Olu luhlu luthambile, luhlala luqine, lomelele, kwaye lumnandi esandleni xa kuthelekiswa nokusikwa kweplasitiki okuqhelekileyo. Ukuba awuzange uyisebenzise ngaphambili ngokuqinisekileyo uya kuchukumiseka, kunye nabathengi bakho. Ukunyuka phezulu kwimipu yethu ye-CPLA, iifolokhwe, kunye neenkonkxa zinokuza kancinci-kodwa umthengi wakho uyakuyonwabela isidlo sabo ekhuselekileyo kulwazi abaluthomalalisayo ifuthe labo lokusingqongileyo. (I-Cutlery nganye icinywe ngokugqibeleleyo)
Ukuchetywa kwethu akulungelanga ukuba kuprintwe. Ibhokisi engaphakathi kunye nebhokisi yokukhupha zombini inokuprintwa ukusuka kubuncinci be-oda ubuninzi beebhokisi ezingama-50,000. Siyakwazi ukuyila ibhokisi ngokweemfuno zakho. Unokukhetha kuzo naziphi na izinto zethu zesitokhwe kwaye uchaze indibaniselwano enqwenelekayo yezinto. Ngolwazi oluthe kratya, ungathumela imibuzo ku- info@ecogianty.com.
• Ihlala kwaye ifanelekile ngokupheleleyo kwindawo yezorhwebo
• Ukuchetywa okuqinisekisiweyo komatshini okulungele ukurisayikilisha inkunkuma yokutya
• Ucocekile kwaye unesitayile, uqinile kwaye uyasebenza
• Ilungile ngokutya okushushu okanye okubandayo
• Ilungele nawuphi na umsitho okanye indibano yangaphandle
• Ukuthengiswa kwetailer yokuthengiswa kweemfuno zabaThengi.
Into CPLA I-cutlery Retail Ibhokisi eneBhokisi yokuLikhupha ibalekile
Umxholo I-7 intshi i-24pcs ukunqunyulwa / ibhokisi yokuthengisa
Isixhobo sokusika I-PLA
Ubungakanani bebhokisi yokuthengisa 18 * 11.8 * 2.9cm
Ibonisa ubungakanani bebhokisi engasasebenzi 25.5 * 12 * 19cm
Ubalo lweCarton Iibhokisi ezili-9
Ubungakanani bebhokisi 25.5 * 12 * 19cm
Edlulileyo: I-CPLA yeplasitiki engenasiphene ye-Sustainable Renewable Cutlery-Ibhegi engagungqiyo
Okulandelayo: I-Eco-Friend bamboo Fibre yoKuhlwa kweTafile yeDiski
Iseti yeCombo enokuCutheka
Cpla Cutlery Combo Set
I-cutlery Combo Pack
I-cutlery Combo Set